Nhau - Ungasarudza sei mutyairi?
Kukura kwechechechechechecheche chinhu chekutanga kutariswa. Kana iri diki kwazvo, hazvigoneke, nekuti vacheche vanokura nekukasira muhucheche, Kana iyo pikicha iri nyore, unotanga kutenga pram diki. Mushure memwedzi mishoma, iwe uchaona kuti nekukura kwemwana, zvinova zvisina kukodzera, uye iwe unofanirwa kutenga imwe nyowani. Ehe, saizi dambudziko rinosanganisirawo saizi mushure mekupeta. Ukaburitsa mwana panze, unoisa pram mudhiramu. Chete kana saizi iri diki zvakakwana mushure mekupeta, iwe unogona kuishandisa Zviri nyore.
Kurema kwepram iyi zvakare chinhu chekufunga nezvacho. Dzimwe nguva unofanirwa kutakura mwana kuenda newe, senge paunodzika pasi kana munzvimbo dzine vanhu, unozoona kuti kuchenjera sei kutenga chinofamba-famba.
Mimwe yengoro dzevacheche dzinogona kuchinja chimiro chemukati, sekugara kana kunyepa. Pakurara pasi, chingoro checheche chakavharwa netumosite tudiki. Kana zvikaitwa, pane hwendefa pamberi pemwana, iyo yakafanana netafura diki, kuitira kuti iwe ugone kuisa bhodhoro uye zvichingodaro.
Dzimwe ngoro dzevana dzakagadzirwa zvine musoro. Semuenzaniso, kune akawanda maitiro akagadzirwa nevanhu. Kune nzvimbo uko mabhegi anogona kusungirirwa, uye nzvimbo dzezvinhu zvakakosha zvevacheche, senge mabhodhoro emukaka uye mapepa ekuchimbuzi. Kana paine zvigadzirwa zvakadaro, zvichave nyore kubuda.
Paunenge uchisarudza mutyairi, iwe unofanirwa zvakare kutarisa kuwanda kwemavhiri, izvo zvinhu zvevhiri, dhayamita yevhiri, uye kutenderera mashandiro emota, uye kana zviri nyore kushanda zvinoshanduka.
Nekuti ganda remwana rakapfava, iwe unofanirwa kutarisa kune yekunze nzvimbo yemotokari uye akasiyana makona nemakona pakusarudza chechechechechecheche. Iwe unofanirwa kusarudza yakatsetseka uye kutsetseka pamusoro, uye usave nemakona mahombe uye isina kutsetseka mota pamusoro, kuti udzivise kukuvadza ganda rakapfava remwana.